Isantya eliguqukayo Pool Pump
Warranty & Service Imigaqo
iSAVER + ke touch screen frequency converter lokuqala kushishino pool, imveliso yemizamo yethu ekufuneni ezintsha okuqhubekayo ukunika amava olungcono umthengi.
Pump, ukuba umsebenzisi elikhulu kombane zokuhlala, lutyabula nje kuphela amandla nto kuyimfuneko, kodwa ivelisa ingxolo rhoqo apho ngokuqhelekileyo ngentla-60, maxa wambi nkqu ukuya ku-70 dBA. iSAVER + swimming pool inverter yi isisombululo efanelekileyo ukuze okonga umbane kunye nokubaleka cwaka.
Ekubeni umsebenzi wayo timer, ungakwazi noba ukubaleka impompo ngesantya esingaguqukiyo, okanye ukuya izibambi-4 umsebenzi ngemihla, ngamnye ngesantya ngamnye. Nge-80% wasindiswa ngesantya esisezantsi, kwanokuba zokusebenza kwayo iiyure ezingama-24 ngosuku ngesantya esisezantsi, uya kuthi bahlawule ngaphantsi. Ukufunda kwamandla kwidispleyi kukunika ufifi njani amandla kakhulu impompo isebenzisa phantsi isantya ezahlukeneyo.
Easy ukonga kwi-80% ngesantya esisezantsi
inqanaba Sound of impompo kuncitshiswa yi-25%
izibambi ozikhethelayo afanelekileyo kwizicelo ezahlukeneyo
ukusebenza product ngcono ngesantya esisezantsi, ngaphantsi imichiza eyaneleyo
Baphila ixesha elide imoto kunye nezinye izixhobo pool
igalelo elikhulu ekunciphiseni GHG
Iindleko isisombululo ngempumelelo
Kuxhomekeka kwimeko nganye, buyiselani ixesha kunokuba ngaphantsi kweenyanga ezili-12. Apha ngezantsi ukubala rough ukuba kangakanani ungonga unyaka kunye iSAVER + inverter yokudada impompo efakiweyo.
Amakhaya kunye pool 50m³ lokudada uqobo mayixhotyiswe swimming pool 1HP (igalelo 0.746kW).
Xa ngenyanga ezisixhenxe lokudada ixesha, inkcitho ngonyaka ngamnye € 752 Emva kokufakela i iSAVER + inverter kwinkqubo, inkcitho ngonyaka ngamnye € 169
Savings yoNyaka = € 583
- Speed ​​eliguqukayo Pool Pump Timer
input Ingozi 220V ~ 240V 220V ~ 240V 220V ~ 240V 220V ~ 240V
Ubuninzi 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
yemveliso Ingozi 1ph, 0 ~ 240V 1ph, 0 ~ 240V 3ph, 0 ~ 240V 3ph, 0 ~ 240V
yemveliso Power Max 1 kW Max 2.2kW Max 1kW Max 2.2kW
imveliso Current Max 5.5A Max 12A Max 4A Max 8A
indawo Rating IP65 IP65 IP65 IP65
Uhlobo Pump isigaba esinye isigaba esinye isigaba Three isigaba Three
Ukupholisa Xa umoya
Joyina Global Network yethu Distributors!